मणिपालको मनपरी : खर्च भए संक्रमितको उपचार, खर्च नभए दुर्व्यवहार | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
घर समाचार राष्ट्रिय समाचार मणिपालको मनपरी : खर्च भए संक्रमितको उपचार, खर्च नभए दुर्व्यवहार
मणिपालको मनपरी : खर्च भए संक्रमितको उपचार, खर्च नभए दुर्व्यवहार
२४ जेष्ठ २०७८, सोमबार ०८:२९
भारतीयहरुको स्वामित्वमा पोखरामा सञ्चालित मणिपाल मेडिकल कलेजका कर्मचारीहरुले उपचारमा गएकाहरुसंग रकम माग्दा नेपालीमा बोल्छ । तर, समस्या आए हिन्दी भाषा प्रयोग गर्दै विरामी लखेटने गर्छ। बर्षौदेखि मणिपालले देखाउँदै आएको यो हर्कत अहिले कोरोनाकालमा झनै मौलाएको छ ।
उपचार खर्च बुझाउँन नसक्दा २१ दिने संक्रमित शिशु अस्पालतबाट निकालिएका छन् । यस अघि ४५ दिनकी संक्रमित शिशु पनि उपचार खर्च तिर्न नसक्दा निकालिइन । दुर्भाग्य निकालिएकी ती शिशुले उपचारका लागि आश्रय पाएको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा प्राण त्यागिन ।
यतिमात्र नभइ मणिपालले उपचारका लागि तोेकेको चर्को शुल्क तिर्न नसक्नेहरु मध्यरातमा रुँदै निस्कनु परेका घटनाहरु धेरै छन् । उपचार खर्च जुटाउन सक्ने संक्रमितको उपचार मणिपालमा हुन्छ तर खर्च जुटाउन नसक्ने भने जतिखेर पनि निकालिन सक्छन् । किनभने यो उस्को धर्म हो ।
त्यसमाथि संघीय सरकारले निशुल्क उपचारका लागि सम्झौता गरेर कोभिड अस्पताल तोकेको यो अस्पतालमा निशुल्कको कतै नाम छैन् भने नेपाल सरकारको नियम आफुले मान्न आवश्यक नभएको झै व्यवहार अस्पालले देखाएदै आएको छ ।
कहाँ हुन्छ सरकार निशुल्क उपचार ?
कोरोना संक्रमित विरामीको निशुल्क उपचार हुन्छ भन्छ सरकार । तर अस्पतालहरुमा धरौंटी र उपचार खर्च बुझाउन नसकेर विरामीहरुको विचल्ली भईरहेको छ । कोरोना संक्रमित विरामीको निशुल्क उपचार गर्न सरकारले सम्झौंता गरेका पोखराका केही निजी तथा सामुदायिक अस्पतालहरुले नैं विरामीलाई उपचार खर्च व्यहोर्न नसकेको भन्दै धमाधम निकाली रहेका छन् ।
मणिपाल शिक्षण अस्पताल पोखरा नजिकै डेरामा बस्ने रोल्पा सुनछहरी गाँउपालिका–७ जेलबाङका जानबहादुर बुढाले धरौंटी रकम र अन्य उपचार खर्च बुझाउन नसकेपछि २१ दिनको कोरोना संक्रमित शिशु जसलाई जण्डिस भएकै अवस्थामा अस्पतालले निकालेको छ ।
मेडिकल एडभाईस बिना डिस्चार्ज (लामा)को पेपर थमाएर डिस्चार्ज समरीमा उपचार खर्च तिर्न नसकेको र गरीब भएकैकारण उपचार गर्न नसकिएको कुरा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ ।
मणिपालको मेनु : ९० हजार धरौटी, २२ देखि २८ हजार उपचार खर्च
मनिपाल शिक्षण अस्पतालमा नै जन्मिएका उक्त शिशुलाई एनआइसीयु वार्डमा भर्ना गर्ने बेलामा १० हजार रुपैयाँ धरौंटी, कोरोना पुष्टि भएपछि थप ९० हजार धरौंटी र दैनिक २२ देखि २८ हजारसम्म उपचार खर्च लाग्ने भन्दै तत्काल रकम जम्मा गर्न अस्पताल प्रशासनले भनेको थियो ।
वैशाख २३ गते सोही अस्पतालमा जन्मिएको २१ दिने उक्त शिशुलाई मणिपालमा यस अघि जानबहादुरले तीनदिनसम्म एनआईसीयूमा उपचार गराएका थिए । फेरि जेठ १२ गते मनिपालमा भर्ना गरेका उक्त शिशुलाई कोरोना परीक्षण गर्दा रिपोर्ट पोजेटिभ देखिएको थियो ।
जण्डिस भएकै अवस्थामा निकालिएका शिशुको यता निशुल्क उपचार
मनिपालले कोरोना संक्रमित र जण्डिसले च्यापेको २१ दिने शिशुलाई गरीब भएकै कारण उपचारबाट बञ्चित गराएपछि तत्कालै पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्र्तगतको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल पोखराले निशुल्क उपचार गरिरहेको छ ।
४५ दिने शिशुले यसरी गुमाईन ज्यान
मणिपाल शिक्षण अस्पतालले २१ दिने यो शिशुलाई मात्र नभई यस अघि पोखरा वडा नं. २८ बस्ने मानबहादुर बिककी ४५ दिने छोरी ईशालाई पनि यसरी नै उपचार नगरी जेठ १५ गते डिस्चार्ज गरिदिएको थियो । हार गुहार गर्दा गर्दै उक्त बच्चालाई अन्तिम अवस्थामा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा पु¥याए पनि धेरै रोगहरुले च्यापिसकेको हुँदा बचाउन नसकिएका उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरुको दुखेसो छ ।
आमालाई मध्यरातमा निकालेपछि शिवको रोदन
विगत ३ वर्षदेखि मृगौंलामा समस्या भएर मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा नै आमाको डायलिसिस गराउँदै आएका पर्वत जिल्ला मोदी गाउँपालिका वडा नं. ६ का शिव केसीले पनि जेठ २२ गते राति २ बजे वृद्ध आमालाई बोकेर मणिपाल शिक्षण अस्पतालबाट बाहिरिनु पर्र्यो । अस्पताल प्रशासनले भने जति धरौंटी रकम र उपचार खर्च बुझाउन नसकेपछि रातको २ बजे आमालाई लिएर गुहार माग्दै उनी पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा पुगेका थिए ।
विचल्ली पारेको कथा धेरै छन मणिपालमा
यति मात्र नभइ पोखराको बाग्लुङ बसपार्कमा रहेको साहारा अस्पतालले पनि कोरोना संक्रमित विरामीलाई यसै गरी विचल्लीमा पारेको छ । पाल्पा घर भई अस्पताल नजिकै नदीपुरमा डेरा गरी बस्ने दानबहादुर विसुवाका ४ जना परिवार मध्ये ३ जनालाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो । सोही अस्पतालमा कोरोना परीक्षण गरेका उनको आफूसहित श्रीमती र ६ वर्षको बच्चामा कोरोना संक्रमण देखिएको थियो ।
सरकारले कोभिड–१९ केयर युनिट सञ्चालनका लागि भन्दै देशभरका एकसय ११ वटा भन्दा बढी निजी तथा सामुदायिक अस्पतालहरुसँग सम्झौंता गरेको छ । जहाँ कोरोना संक्रमितका लागि सरकारले नै पैसा उपलब्ध गराउँदछ । प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन ३ हजार ५ सय रुपैयाँदेखि १५ हजारसम्म सरकारले उपलब्ध गराउने सहमति नै गरेको छ । गत जेठ ६ गते पोखराका दुई निजी अस्पतालहरु मणिपाल शिक्षण अस्पताल र गण्डकी मेडिकल शिक्षण अस्पतालसँग पनि सरकारले सम्झौंता गरेको थियो ।
तर मणिपाल शिक्षण अस्पतालले सिलसिलावद्ध ढंगले सरकारसँग गरेको सम्झौंता र संकटको घडीमा पूरा गर्नुपर्ने मानवीय दायित्व समेत पूरा गरेको छैन । यसरी आर्थिक अभावकैं कारण सरकारसँग सम्झौंता गरेर पनि मणिपाल शिक्षण अस्पतालले बिरामीको उपचारमा वेवास्ता गर्दै आईरहेको छ ।
यता, सरकारी अस्पतालमा कोरोना संक्रमितका विरामीहरुले निशुल्क उपचारका नाममा बिभिन्न समस्या झेलिरहनु परेको छ । यस्ता प्रतिनिधिमूलक घटनाहरु पोखरामा मात्र होइन, सरकारले सम्झौंता गरेको १११ भन्दा बढि निजी तथा सामुदायिक अस्पतालहरुमा दोहोरिरहेका छन् ।
यतिबेला कोरोना महामारीका बेलामा गरिब, विपन्न तथा मध्यम वर्गका जनताहरुलाई सरकारले भने झैं निःशुल्क उपचार सेवा पाईरहेका छैनन् । नेपाल सरकारसँग सम्झौता गरेको निजी तथा सामुदायिक अस्पतालहरुले सम्झौता विपरीत यस्ता कार्यहरु गरेको प्रष्ट देखिन्छ । Source: news24nepal.tv